Uphengululo lwerhamncwa liza kuza kundibona | Uncwadi lwangoku
Uphengululo lweGongqongqo liza kundibona
UAlberto Legs | | iintlobo, Iincwadi zoLutsha, Inoveli
Eyona idumileyo emva kwenkulumbuso yefilimu kaJuan Antonio Bayona ekhutshwe ngo-2016, I-monster iza kundibona ivela kuPatrick Ness Ayisiyoncwadi yabantwana eneemvakalelo kuphela, kodwa ikwanomsebenzi wokuphakamisa ulwazi malunga nezinto ezinje ngokuxhatshazwa, ilahleko kunye nemiqobo.
1 Isishwankathelo seMonster siza kundibona
2 Abalinganiswa abavela kwi-Monster beza kundibona
3 Isilo siza kundibona: imvelaphi elusizi yentsomi eneenjongo ezintle
Isishwankathelo seMonster siza kundibona
UConor O'Malley ngu inkwenkwana eneminyaka eli-13 ubudala efumana iphupha elifanayo lobusuku obuphindaphindiweyoImizuzu esixhenxe emva kobusuku ezinzulwini zobusuku ilizwi lisebezela igama lakhe kwifestile yegumbi lakhe lokulala, apho angabona khona icawe yakudala enamangcwaba emithi enkulu yew. UConor uphuma ebhedini, ungqiyame ngefestile kwaye ubona "isigebenga" samaphupha akhe, elinye lenziwe ngamasebe kunye namagqabi kodwa ekwimo yomntu. I-monster ithembisa ukumxelela amabali amathathu ngokutshintshela uConor ngokumxelela ibali lakhe. emva.
Ukubonakala kwe-monster kunye namabali alandelelanayo uxelela uConor ukuba ahambisane nexesha elinye nonina kwafunyaniswa ukuba unomhlaza kwaye kwafuneka afumane unyango lwe-chemotherapy. Kwangelo xesha, uConor unengxaki yokuxhatshazwa esikolweni kwaye ukungabikho kukayise akuncedi ukumelana ngcono.
Kuwo onke amabali axelelwa yi-monster, elokuqala alaziwa ngumntwana, ngelixa elesibini limenza abe netyala lokutshatyalaliswa kwegumbi lokuhlala kukaninakhulu, naye agcina ubudlelwane obubandayo, ngelixa owesithathu emkhuthaza ukuba ahlasele UHarry, inkwenkwe yesikolo ehlala ihlekisa ngaye.
Emva kokubalisa ibali, uConor uya kuqala ukwamkela iimvakalelo zakhe malunga nokugula kukanina, isibindi sakhe kunye nazo zonke izinto ezinobungqongileyo kwindalo yakhe.
Abalinganiswa abavela kwi-Monster beza kundibona
IConor O'Malley: U-Sarcastic kwaye unobubele, uConor yinkwenkwe ekufuneka ejongane nokungabikho kukayise kwaye atyelele umakhulu angadibaniyo naye njengemvelaphi yokugula kukamama onesifo somhlaza.
Isilwanyana: Yenziwe ngamagqabi namasebe, kodwa imbonakalo yomntu, "isigebenga" siluhlobo oluzama ukunceda abantu ngeendlela ezinokuthi zingabi mnandi ekuqaleni. Iintsomi zakhe zinokuqulatha ukuqonda okungathandabuzekiyo kokuziphatha, kodwa iimfundiso zakhe zinokwenziwa kuphela xa umxholo uwuqondile umxholo webali.
Umama: Nangona kumdlalo bhanyabhanya lo wayebizwa ngokuba nguLizzie, encwadini kuthiwa "Mama", njengoko uConor ebhekisa kuye. Umfazi, nangona ethanda unyana wakhe, akanako ukunceda kodwa axoke kuye (njengoko kuye) malunga nokuqiniseka ukuba uza kufa kungekudala.
Padre: Uyise kaConor wathuthela eMelika kwiminyaka emi-6 ngaphambi kweziganeko zencwadi enomfazi omtsha. Xa umama kaConor egula, utata wakhe ubuyela eNgilani ukuya kumtyelela iintsuku ezimbalwa, nangona kungekudala ebuyela eMelika ukuya kuzalwa konyana wakhe omtsha.
Umakhulu: Uqwalaselwe ngokuhlala umncinci ubomi bonke, umakhulu kaConocer lipolisa eliqhubeka nokudaya iinwele zalo ukuthintela iinwele ezingwevu zingaveli. U-Smug kwaye uzicingela yedwa, akahambelani nomzukulwana wakhe, ngakumbi kuba akanalo uvelwano oluyimfuneko lokuqonda omnye umntu ngaphandle kwakhe.
Isilo siza kundibona: imvelaphi elusizi yentsomi eneenjongo ezintle
UShioban Dowd, umbhali woluvo lokuba uPatrick Ness angabhala.
Imvelaphi ye-monster iza kundibona inokufumaneka kwi Umzobo wokuqala ngumbhali wase-Anglo-Ireland u-Siobhan Dowd, owafunyaniswa enomhlaza ngo-2005. Ngaphandle kokugula, uDowd wade waxoxa lo mbono noDenise Johnstone-Burt, umhleli weWalter Books.
Emva kokubhubha kombhali ngo-2007, UDenise wagqiba kwelokuba acele uPatrick Ness, omnye wabahlobo bakhe, ukuba babhale okokugqibela kolu luvo. Ngelixa uJim Kay wayephethe ukuyicacisa, nangona uNess noKay babengazani kwade kwapapashwa incwadi ngoMeyi ka-2011. Njengokuba uNess avumile ngamanye amaxesha, "esinye sezizathu esamkhokelela ekubeni abhale incwadi ethi It yayikukungabikho ngokupheleleyo kwemiqobo, kuba wamitha inkqubo yendalo njengengxoxo yakhe phakathi kwakhe noSiobhan Dowd uqobo.
Uluhlu olwenziwe ngaphakathi uhlobo olwaziwa njenge "fantasy low"I-Monster iza ukuNdibona yafumana uphononongo olukhulu emva kokupapashwa kwayo, enemizekelo efana noJessica Bruder weThe New York Times, eyayibiza ngokuba "libali elibuhlungu kakhulu" kunye "nobugcisa obunamandla."
Kwakhona, incwadi ibe yimpumelelo enkulu kwintengiso kwaye yaphumelela amabhaso amaninzikubandakanya iBritish Book yaBantwana ka-2011 yiRed House yeMbasa yaBantwana yeNcwadi okanye ukukhankanywa kwencwadi kwezinye zezona zindululo zibalulekileyo emhlabeni.
Ukulandela ukumiliselwa kwale ncwadi kunye nempumelelo yayo elandelanayo, inkampani yemveliso i-Focus Features ithenge amalungelo kuyo ngo-2014 ngenjongo uyiqhelanise nomdlalo bhanyabhanya. Ekhokelwa nguSpanish Juan Antonio Bayona kwaye ibhalwe nguPatrick NessUmbhali wencwadi, umboniso bhanya-bhanya wakhutshwa ngo-Septemba ngo-2016 eneqonga eliquka uLewis MacDougall (uConor), uLiam Neeson (ilizwi le-Monster), uTom Holland (imodeli yeMonster), uFelicity Jones (uLizzie, umama kaConor) , Sigourney Weaver (UNksk Clayton, umakhulu) kunye noToby Kebbell (Liam, utata).
Nangona ifilimu incedisile ukugubungela uhlahlo-lwabiwo mali oluzizigidi ezingama-20, ibingeyompumelelo enkulu, nangona ifumene uphononongo, kunye nemizekelo enje ngo-86% uphononongo oluqinisekileyo kwinethiwekhi yeTatates ebolile.
Yaguqulwa yaba bubungqina obuphambili bebhinqa elisaphilayo eliye laqulunqa iindlela ezintsha zokujongana nemicimbi ebikade ingabalulekanga ukuza kuthi ga ngoku, I-monster iza kundibona yaba sisibane phakathi kobumnyama.
Kwibali elihle elilusizi elilungiselelwe abantu abancinci abaya bekwazi ubunyani kunye nezixhobo zokusombulula iingxaki.
Ukhe wafunda Ndiza kubona inyoka?
Iincwadi ezifuna ukuziqhelanisa neefilimu zazo
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Iincwadi zoLutsha » Uphengululo lweGongqongqo liza kundibona
Ndiyayithanda incwadi indlela endiyithandayo ngayo
IMBALI EBALULEKILEYO YOKUSEBENZA KWIINCWADI ZONCWADI.
Uyibhala njani inoveli: ukukhangela isitayile